ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေမှာ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ – it4a
လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ Finance ပိုင်းကို CFO တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဘယ်လိုနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီး ကိုင်တွယ်နိုင်မလဲ?
တတိယပြဿနာကတော့ Technology Limitation ပါ။ တစ်ချို့ Technologies တွေက Browser မှာပဲအသုံးပြုနိုင်ပြီး Phone or mobile မှာ အသုံးမပြုနိုင်တာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် Main Frame မှာသာ အသုံးပြုနိုင်တာမျိုး အစရှိတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလို Technologies ကို အကန့်အသတ်နဲ့ အသုံးပြုနေရတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းက မလိုအပ်ဘဲ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို SAP ရဲ့ S/4HANA Solutions က ဒီပြဿနာတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ကူညီနိုင်မလဲ?
« Intelligent Bank တစ်ခုအဖြစ်ကူးပြောင်းဖို့ ဘာတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုမလဲ? New Normal မှာ ပုံစံအသစ်နဲ့ လုပ်ငန်းဘယ်လိုလည်ပတ်မလဲ။ »